International Energy magweta muNetherlands - Law & More
Muchokwadi, mutemo wesimba wakakosha kana simba richitengwa, kupihwa kana kugadzirwa. Vagadziri veMagetsi pamwe nemakambani uye nevanhu vakazvimirira saka vanotamba chikamu mune izvi. Law & More'' Magweta anonyatsocherechedza zviitiko zvese zvemutemo wesimba, kusanganisira zviitiko zvitsva mumunda wechizvarwa chesimba rakasimba.
KUTARIRA MUNHU WEMUTEMO WERERO?
> Iwo mutsva wesimba mutemo
> Zvemutemo mumunda wevanopa simba
> Emissions kutengeserana uye retifiketi kutengesa
Nyanzvi dzedu dzine maitiro akataridzika, sezvavanotarisa pane ese mafomu esimba. Saka, mafuta, gasi echisikigo, magetsi, biomass nemhepo uye nemagetsi esolar. Nekuda kwekuita uku kwakadzamara Chekupedzisira, isu zvakare tinoshanda mumunda wezvinhu zvekushandisa kunzvimbo dzekumaindasitiri, tichivhara zvigadzirwa zvakaita soutsi uye nemadhimoni emvura. Saka, iwe unoda here nyanzvi mune zvemitemo yesimba? Law & More inokupa iwe inotevera masevhisi kubva kune ese Eindhoven uye Amsterdam:
• Kudhiza kumusoro kupisa uye masimba zvibvumirano;
• Kupa rairo maererano nekutenga nekutengesa kwesimba;
• Kupa rairo nezve kuteverwa nemutemo wesimba uye zvibvumirano zvemasimba;
• Kupa rairo nezve chekuita chirongwa chakasimba chesimba;
• Kudhiza zvirongwa zvekubudirira kwesimba;
• Kunyorera mapemiti uye kusabvumirwa;
• Kupa kuraira kutengesa kunobuditsa uye kutengesa zvitupa.
kuva negweta ndiani
kunyange pakupera kwevhiki ”
Iwo mutsva wesimba mutemo
Simba remutemo rinoita basa rakakosha munharaunda yanhasi, sezvo tisingakwanise kuita tisina magetsi, mwenje uye kupisa. Mazhinji esimba achiri kugadzirwa nemafuta echisaririra akadai semafuta uye gasi, asi mafuta aya akaipa kune zvakatipoteredza uye, mukuwedzera, ari kupera. Kuona kuti hatipererwi nesimba uye nekuvandudza nharaunda, isu tave kuzoshandisa mamwe magetsi senge mvura, mhepo, chiedza chezuva uye biogas. Aya magetsi anopa ramangwana, nekuti haana kukuvadza nharaunda uye zvakare haaperi.
Hunyanzvi hwedu mumutemo wesimba
Isu tinotarisa pamutemo wesimba unotarisa pamhepo nemagetsi esola
Wese mutemo weDutch neEuropean unoshanda kune mutemo wezvakatipoteredza. Ngatizivisei uye tikupei zano
Kodzero dzekusimudza / kutengesa
Uri kutsvaga nyanzvi yekutengesa ma <em> emissions? Isu tinofara kukubatsira iwezve!
Uri kubata neuyo wega simba here? Nyanzvi dzedu dzinofara kukubatsira
Kuitira kuti ive nechokwadi chekuti ramangwana-chiratidzo chesimba uye mamiriro ekunze ari kuteedzeredzwa, Netherlands yapedzisa Chibvumirano cheNgezi Ekusimudzira Kukura. Vavariro yechibvumirano ichi ndechekuita kuti Netherlands itorese zvachose pasimba rinosimbiswa na2050. Chibvumirano cheNgezi chine zvibodzwa zvakasiyana-siyana zvemakambani zvinoda iwo kuchengetedza simba. Uye zvakare, iyo hurumende yeDutch yakapinda muzvibvumirano zvenguva refu nehuwandu hukuru hwezvikamu kutarisa hutanho hwekuvandudzwa kwesimba. Iwo makambani ari chikamu chezvibvumirano izvi achave nezvakawanda zvakanakira: anozobatsirwa kubva mukuchengetedza mari, akawanda matanho ekugadzira uye mufananidzo unogadzikana. Asi pane zvekare zvisungo zvakati zvakabatana nezvibvumirano zvemakore mazhinji. Izvi zvibvumirano zvinonetsa uye nehuwandu hukuru hwemirairo hunokweverwa. Iyo kambani yako inokanganiswawo nemitemo mitsva here? Tsigiro yemutemo yakakosha yakakosha, kuti uzive paumire. Ndokumbirawo mubate Law & More uye tichafara kukubatsira.
Zvemutemo mumunda wevanopa simba
Iwe unofanirwa kubata nekutenga kana kutengesa kwesimba here? Ipapo iwe unoziva kuti iwe unogona kutenga magetsi zvese pamusoro-iyo-counter uye kuburikidza nekutengesa kutengesa. Sezvo neine-over-the-counter nzira mumwe wemapato anogona kuenda kunobhuroka, tsigiro yepamutemo yakakosha. Zvakakoshawo kuti zvibvumirano zvakajeka zviitwe kuitira kuti imwe bato iite zvayakasungirwa kuita uye mutengesi haatomborasikirwa nechero kurasikirwa. Law & More inopa rutsigiro muzviitiko izvi kuti usatarisana nezvimwe zvinoshamisa.
Muzviitiko zvakawanda, kuwanikwa kwemagetsi negesi kunoitika kuburikidza nemagetsi kana gasi network. Vanhu kana makambani anopa simba kune vamwe vatengi vanosungirwa kugadza network inoshanda. Nekudaro, pane zvinosarudzika kumutemo uyu: kana, semuenzaniso, iwe ukashandisa nzira yakavharwa yekugovera kana tambo yakatwasuka, chisungo chekugadza opareta network haishande. Iyo yakavharwa yekugovera system ndeye bhizinesi network iyo inogumira munzvimbo uye inogona kungova neimwe nhamba yevatengi. Varidzi veiyo yakavharika yekugovera system vanogona kukumbira kuregererwa kubva kune chisungo chekusarudza network network. Mutsetse wakananga uripo kana tambo yemagetsi kana pombi pombi inobatanidza mugadziri wesimba zvakananga kune mushandisi wesimba. Yakananga tambo haisi chikamu chetiweki, saka hapana chisungo chekuisa musheti wetaipi mune ino kesi.
Kana iwe uri chikamu chemutengesi wesimba, zvakakosha kuti iwe uone kana paine yakavharika nzira yekugovera kana mutsara wakananga. Izvi zvinodaro nekuti kodzero dzakasiyana nezvisungo zvinotamba chikamu mumhando mbiri dzekugovera. Nekudaro, pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kufunga nezvazvo. Semuenzaniso, vanopa simba vanogona kuda rezinesi kuendesa gasi nemagetsi kune vatengi vadiki. Uye zvakare, vanopa simba vanofanirawo kufunga nezve mirau kubva kuHeat Act, iyo inokanganisa mhedzisiro yezvibvumirano zvinopisa.
Iwe unayo chero mibvunzo kana kusava nechokwadi pamusoro pemutemo wesimba kune vanopa simba? Wobva wafona mune nyanzvi dze Law & More. Isu tinopa rubatsiro rwepamutemo kumakambani nevatengi vanosangana negasi nemagetsi. Kunyangwe iwe uri kunyorera rezinesi, kuumba kondirakiti yemagetsi kana kutora chikamu mukutengeserana kwesimba, nyanzvi dzedu dziri pabasa rako.
Emissions kutengeserana uye retifiketi kutengesa
Sekambani, iwe unofanirwa kubata nekutengesa emissions kana kutengesa chitupa? Iwe unofanirwa kuverenga kuti yakawanda sei CO2 yaunoburitsa gore rega rega, kuitira kuti iwe uwane huwandu hwakakodzera hwesununguko yekumiswa. Kana iri iyo nyaya yaunobvisa yakawanda, nekuti kutenga kwechigadzirwa chako kwawedzerwa, iwe uchazoda mvumo yekuwedzera. Kana iwe uchida mamwe akawanda emagetsi, iwe unogona kutora chikamu mukutengesa chitupa. Panguva mbiri idzi, Law & More'' Magweta achauya anobatsira iwe. Nyanzvi dzedu dzinotarisa pane emissions kutengesa uye chitupa kutengesa uye ziva maitiro ekukubatsira iwe kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinacho Saka, une chero mibvunzo nezve emission kodzero? Iwe unoda kunyorera mvumo yekubuda? Kana iwe unoda rairo pane emissions kutengesa kana chitupa kutengesa? Ndokumbirawo ubate magweta pa Law & More.